यसकारण ‘कुछ कुछ होता हे’मा काजोलले लगाइन् हेयरबेण्ड - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / यसकारण ‘कुछ कुछ होता हे’मा काजोलले लगाइन् हेयरबेण्ड
यसकारण ‘कुछ कुछ होता हे’मा काजोलले लगाइन् हेयरबेण्ड
सोमबार, पुष २६, २०७८
निर्माता करण जोहारको फिल्म ‘कुछ कुछ होता हे’ बलिउडको आइकनिक फिल्ममा पर्दछ । यो फिल्मलाई दर्शकले अहिले पनि उत्तिकै मनपराउँछन् ।
फिल्ममा प्रेम र दोस्तीसँगै कलेज जीवनलाई निकै रोमाञ्चक किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्मले बक्सअफिसमा कमाईको हरियो झण्डामात्र गाडेन, फिल्मले फेसनको दुनियाँमा एउटा नयाँ ट्रेण्ड सेट गरिदियो । जुन फेसन शैली अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ ।
फिल्ममा अभिनेता शाहरुख खान नेक चेन लगाएर युवतीहरुलाई फ्रेन्डसिप बेण्ड बाँध्ने चरित्रमा देखिएका छन् । यसमा अभिनेत्री काजोलको हेयर बेण्ड निकै लोकप्रिय भएको थियो । काजोलले आधा फिल्ममा हेयरबेण्ड लगाएकी छन् । उनले हेयरबेण्ड लगाउनुको कारण उनको लुक्सलाई पूर्णता दिन भने पक्कै थिएन । यसको कारण अर्कै थियो । जुन रहस्यलाई वर्षौपछि करण जोहारले हालैमात्र खुलाएका छन् ।
हालैमात्र काजोल र करण अभिनेता रणवीर सिंहको शो ‘द बिग पिक्चर’मा उपस्थित भएका थिए । यो उपस्थितिमा करणले ‘कुछ कुछ होता हे’मा काजोलको हेयरबेण्डसँग जोडिएको एक रोचक कथा सुनाएका थिए । करणका अनुसार काजोलले आफ्नो कपालको समस्या समाधान गर्नका लागि हेयरबेण्ड लगाउनु परेको थियो ।
‘फिल्मको कथा अनुसार अञ्जलीले हेयरबेण्ड लगाउनुपर्ने अवस्था थिएन । तर काजोलको विगमा समस्या थियो, जुन समाधान भइरहेको थिएन । त्यहीकारण हेयरबेण्डको प्रयोग विगलाई ‘फिक्स’ गर्नका लागि गरिएको थियो । हेयरबेण्डका कारण विग सही स्थानमा रहेको थियो । यही एक्सिडेण्टल हेयरबेण्ड एक्सपेरिमेन्ट पछि गएर फेसन ट्रेण्डमा लोकप्रिय बन्यो’, करणले भनेका छन् । फिल्ममा रानी मुखर्जीको पनि अभिनय थियो ।
चर्चित गायिका शान्ति श्री परियारको आवाजमा आएको नया गीत् युटुबमा भाइरल
कटरीनासंग-विकीको विवाह भएको केहि महिना नहुँदै यस्तो पोल खुलेपछि…..
बुद्ध लामाले सार्वजनिक गरे छम छमी नाच्ने तामाङ् सेलो गीत (भिडियो हेर्नुस्)
५.राम्रो गाउँदा गाउँदै ‘भ्वाईस अफ किड्स’बाट बाहिरिएपछि दर्शिल पन्तले कोचहरुलाई यस्तो भने, पेमा बाहिरिनु बारे भ्वाईसको भित्री कुरा खोले (भिडियो हेर्नुस)
६.बिग बोसको घरमै गर्भवती भईन यी प्रतिष्पर्धी तेजस्वी प्रकाश , आखिर कस्को बच्चा छ उनको पेटमा ?
७.समय तोकेरै नासाले भविष्यवाणी गर्यो, चन्द्रमामा आउने हलचल र पृथ्वी नष्ट हुने दिन
८.पर्यटन मन्त्री आले चढेको गाडी दुर्घटना
© 2022 Khabar Nepali. All Rights Reserved.